Degdegg:Cali Khaliif Galayd oo Hadda soo gaadhay Hotelka Maan-soor ee Hargeysa | Baadiye Media Center
Degdegg:Cali Khaliif Galayd oo Hadda soo gaadhay Hotelka Maan-soor ee Hargeysa
Hargeysa (BMC)-Hogaamiyaha Khaatumo Cali Khaliif Galaydh ayaa daqiiqado uun ka hor la arkay isagoo soo galaya Hotelka Maan-soor ee Hargeysa,waxay ahayd salaadii makhribka uun markii sidaa foodda looga qaaday waxaanan kamid ahaa dadkii dadkii ugu horeeyey ee ay barxadda weyn ee wajahaddahore ee hudheelka isku salaameen.
Professor-ka waxaa la socday intay indhahaygu qabanayeen laba askri oo tuute xidhnaa iyo nin dhalinyaro ah oo boorsada u waday,nta aanu soo gaadhin ani hudaha Hotelka ayey koox sidayda oo kale salaadda ka soo baxay oo raxan u taagnaa albaabka laga galo Hulteeka si qabaw u salaameen maadaama aanay garanayn isaga oo koofiyad xidhnaa iyo xiligaas oo ay heemamow ahayd darteed.
marka laga reerbo mid kamida raggaasi oo magiciisa oo sadexan ku yidhi “waar maydaan garanayn waa Cali Khaliif Galaydh e”Professor Galaydh markii dambe waxaa ku soo xoomay dad farabadan oo markiiba salaanta ku boobay markii ay salaantii iyo erayadii koob koobnaa dhamaadeen ayaa loo gelbiyey xagga qolkii loo diyaariyey inuu ka dago Hotel-kaasi.
hadda iyo wixii ka dambeeya ayaa lagu wadaa ina u bilawdaan kulamada iyo wada sheekaysiga hoose ee masuuliyiinta xukuumadda Somaliland kadibna xarunta Madaxtooyada loogu geyndno Madaxweyne Siilaanyo ilaa berri iyo wixii ka dambeeya hadii alle idmo balse warar aan aad loo xaqiijin ayaa Baadiye u sheegay inuu Hargeysa u dhaafidoono dhinaca Nairobo hasa yeeshee warkaasi wali mid bisil maaha.
“naga daa hadda way soo daaleen oo saaka oo dhanbay soo socdeene sawirka sawdigaa arkaya inay hadda uun soo galeen hadaad doonata sawirradiisiihore mid soo qaado haddii aad doonayso inaan warkaa lagaaga horeyn” sidaa waxaa yidhi Coloneyl Maxamed Kaahin Axmed oo kamid ahaa xubno sarsare oo ku soo dhaweeyey Hotelka.